Lumbini Times | Nepal's Independent News Portal. के हो ‘एमाले महाधिवेशन अन्तर्राष्ट्रिय नजरमा’ लेखिएको भाइरल पोस्टको तथ्य ? :: Lumbinitimes
चितवनमा भइरहेको नेकपा एमालेको १० औँ महाधिवेशन बारे अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा भएको कभरेज दावी गरिएको एउटा पोस्ट यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। वागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसहित थुप्रैले यो पोस्ट फेसबुकमा सेयर गरेको देखिन्छ। के साँच्चै दावी गरिएको जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले लेखेका हुन्? यसबारे हामीले तथ्य जाँच गरेका छौँ।
वागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले गरेको यो पोस्टमा सोमबार रातिसम्म १११ कमेन्ट, ६३ सेयर र साढे नौ सय भन्दा बढी रियाक्सन छन्।
पौडेलबाहेक अरु थुप्रैले पनि फेसबुकमा यो पोस्ट सेयर गरेका छन्।
के देखियो तथ्य जाँचमा ?
१) ठाउँ कब्जा गरेको हिसाबले एमाले महाधिबेशनमा १० लाख भन्दा बढी मानवसागर उर्लिएको देखियो – बिबिसी
भाइरल भएको पोस्टमा पहिलो दावी बीबीसीको उल्लेख छ। तर हामीले सर्च इन्जिन गुगलमा “१० लाख” र “एमाले” राखी बीबीसी नेपालीमा पछिल्लो एक हप्तामा प्रकाशित सामग्री खोज्दा दावी गरिएको समाचार भेटिएन।
त्यसैगरी अङ्ग्रेजीमा UML र General Convention कीवर्ड राखी सर्च गर्दा बीबीसी अङ्ग्रेजीमा पनि कुनै समाचार भेटिएन।
२) कार्ल मार्क्स पछि विश्वमा कम्युनिस्ट धार अब कस्तो रहने भन्नेमा एमालेले तय गर्नेछ – अलजजिरा
भाइरल भएको दोस्रो पोस्टमा अलजजिराको समाचार उल्लेख छ। हामीले अलजजिराको वेबसाइटमा नेपालसम्बन्धी के के समाचार राखिएको छ भनी खोज्यौँ। पछिल्लो पटक ११ नोभेम्बरमा अलजजिराले स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले सबै वयस्कलाई अप्रिल मध्यसम्ममा खोप लगाइसक्ने बताएको खबर प्रकाशन भएको देख्यौँ। त्यो भन्दा अघि २० अक्टोबरमा बाढीपहिरोका समाचार छन्। एमाले महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै खबर अलजजिराको वेबसाइटमा देखिन्न।
३) नेपालमा देखिएको कम्युनिस्ट पार्टी र केपी ओलीको क्रेज अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै रहेको प्रारम्भिक अनुमान – आजतक
भाइरल भएको पोस्टमा तेस्रो दावी भारतीय टेलिभिजन च्यानल आजतकको रहेको छ। हामीले आजतकको वेबसाइटमा खोज्दा पछिल्लो एक सातामा केपी ओली उल्लेख गरिएको एउटा समाचारमात्र भेट्यौँ। शुक्रबारको न्युज फ्ल्यासमा आजतकले ओलीले सत्तामा फर्किए भारतसँग कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख वार्ता गरेर फिर्ता लिने बताएको उल्लेख छ।
४) नेकपा एमाले महाधिवेशनलाई लिएर दक्षिणी एसियामा कम्युनिस्टको दरिलो उपस्थिति रहेको र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले यसको उच्च मूल्यांकन गरेको सि जिङ्पिङ्गज्युको भनाइ बाहिर आएको छ- सिन्ह्वा
भाइरल पोस्टहरुमा चौथो दावी चिनियाँ समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाको गरिएको छ। हामीले गुगल सर्च मार्फत् पछिल्लो सातामा प्रकाशित नेपालसम्बन्धी समाचार सिन्ह्वाको वेबसाइटमा खोज्दा दावी गरिए जस्तो समाचार भेटेनौँ।
५) नेपालमा आगामी केही समय भित्रै कम्युनिस्ट सरकार बन्ने र त्यस्को नेतृत्व केपी ओलिले गरिरहने स्थिति बनेको छ – रोयटर्स
भाइरल पोस्टहरुको पाँचौँ दावी बेलायती न्युज एजेन्सी रोयटर्सको छ। हामीले रोयटर्समा पछिल्लो एक सातामा प्रकाशित समाचारहरु गुगल सर्चमार्फत् खोज्यौँ। तर केपी ओली उल्लेखित कुनै समाचार त्यहाँ भेटेनौँ।
६) मान्छेहरु महाअधिवेशन भन्नाले एमालेको कार्यक्रमलाई सम्झिनेछन् – द न्युयोर्क टाइम्स
भाइरल पोस्टहरुको छैटौँ तथा अन्तिम दावी न्युयोर्क टाइम्सको रहेको छ। न्युयोर्क टाइम्सले नेपालसम्बन्धी प्रकाशित समाचारलाई छुट्टै पेजमा पनि देखिने बनाएको छ। त्यसमा हेर्दा नेपालसम्बन्धी पछिल्लो समाचार अक्टोबरमा नेपालबाट हराएका मूर्तिहरुबारे देखिन्छ। नोभेम्बर महिनामा नेपालसम्बन्धी कुनै समाचार त्यसमा देखिन्न। त्यसैगरी एमाले महाधिवेशनबारे पनि कुनै समाचार त्यहाँ देखिन्न।
दावी : विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले एमाले महाधिवेशनबारे लेखेका छन्।
तथ्य : मिथ्या सूचना। भाइरल पोस्टमा उल्लिखित मिडियाले त्यसमा दावी गरिए जस्तो विषय लेखेको भेटिएन। तसर्थ त्यसमा गरिएका दावी गलत छन्।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर १४, २०७८, ०९:५९:००